Ukraine International Airlines na-enyere ezinụlọ nke ndị PS752 metụtara aka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ukraine International Airlines na-enyere ezinụlọ nke ndị PS752 metụtara aka
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • News • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
Ukraine International Airlines na-enye aka nye ezinụlọ nke ndị metụtara PS752
Ukraine International Airlines na-aga n'ihu na-enye ezinụlọ nke PS752 ndị njem na ndị ọrụ nwere ihe ọmụma, nkwado iwu, na nkwado mmetụta uche na Isi inlọ Ọrụ nke ụlọ ọrụ dị na Kyiv yana Asslọ Ọrụ Enyemaka ezinụlọ na mba ọzọ.
O yighị ka anyị ga-agwọta ihe mgbu nke ụgbọelu UIA nwụrụ nke were ndụ ndị njem 176 na ndị ọrụ na Jenụwarị 8, 2020, na mbara igwe Iran. Ukraine International na-eche ezinụlọ ọ bụla na onye ọ bụla metụtara. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa kemgbe ihe mberede PS752 na Tehran. Otu o sila dị, iru uju nke ndị otu UIA, ndị ezi-na-ụlọ, na ndị enyi nke onye nwụrụ anwụ anabataghị ịda mba.
“Echiche anyị na obi anyị na ndị njem PS752 na ndị ọrụ nọ. Ọnwụ a jọgburu onwe ya ga-anọgide na-afụ ụfụ na Ukraine International, ”- Yevhenii Dykhne, UIA CEO kwuru, n’aha ndị otu niile.
Iji kpọtụrụ onye ikwu nke ndị njem PS752 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri, bido n'ụbọchị otu mba Ukraine bidoro inye ozi, iwu, na nkwado mmụọ site na isi ụlọ ọrụ ụgbọelu na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ. Ulo oru oku di na Ukraine (mba uwa), Canada, na Iran - obodo ndi tufuru otutu umu amaala - na aru oru oge nile.
Ukraine International Airlines na-ekwusi ike mgbe niile na ndị isi Iran na Embasii nke Ukraine na Islamic Republic of Iran gbasara ibu dị n'okpuru ikike nke ndị Iran ugbu a. Linegbọ elu ahụ gbalịsiri ike ka eweghachitere ndị ezinụlọ PS752 na ndị ọrụ ụgbọ nke ezinụlọ ha.
“Anyị ghọtara nke ọma na nkwado ego na-abịa n’oge dị ezigbo mkpa maka ezinụlọ nke ndị njem na ndị ọrụ ya. Anyị nwere ekele maka nraranye na mbọ dị ire nke ndị ọka iwu mba ụwa, ụlọ ọrụ mkpuchi na ụlọ ọrụ mkpuchi nke ha na-eme iji nweta usoro ụfọdụ akọwapụtara iji nweta ikikere na US ma malite site na ịkwụghachi ụgwọ n'okpuru ọnọdụ nke usoro mmachi. Nghọta na onyinye nke ndị ikike dị iche iche nke ikike niile gbasara usoro nkwụghachi ụgwọ dị oke mkpa ma dịkwa mkpa. N'akụkụ a, anyị na-atụ anya ka usoro niile ga-agwụ n'ọdịnihu dị nso, "- Yevhenii Dykhne kwuru.
Linegbọ elu ahụ na-ekele gọọmentị nke Ukraine na Canada maka ịhọpụta ndị ọkachamara ka ha nyochaa ọdachi ahụ. Ukraine International Airlines kpọrọ Gọọmentị nke Ukraine, Canada, UK, Sweden, na Afghanistan na nguzo siri ike nke mba ga-enyere nyocha zuru oke na nghọta na-akpata ihe kpatara ụgbọ elu UIA, nyere aka kọwaa ụgwọ na ịkwụ ụgwọ.
“Anyị enweghị ike iweghachi oge. Agbanyeghị, n'oge ndị a siri ike, anyị na-agbasi mbọ ike iji nyere ezinụlọ nke ndị njem PS752 na ndị ọrụ aka nkwado kachasị, "- Yevhenii Dykhne chịkọtara.